သောကြာ, ၂၄ မေ ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ကားခလျှော့ချရေး ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြ
ကားခလျှော့ချရေး ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြ	အောင်မြတ်စိုး | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၁ မိနစ်	ဘန်ကောက် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကျောင်းကားခကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်လိုက်သဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၈၀၀ ခန့် ယနေ့မနက်တွင် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှု ကလေးမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အာဏာပိုင်များက လိုက်လျောမှု ပြုလိုက်သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ရှိ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကလေးမြို့တွင်းသို့ ပြေးဆွဲနေသော ကျောင်းကားများတွင် ကားခကို ပုံမှန် ၁ဝဝ ကျပ် ကောက်ခံနေခဲ့ရာမှ ယခုလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကျပ် ၂ဝဝ အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြန်လည်လျှော့ချရန် ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း မဇ္ဈိမသို့ ဆက်သွယ်လာသော ဆန္ဒပြကျောင်းသားများက ပြောသည်။ သီးခြား ဒေသခံများကလည်း ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားခြင်းကို တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် အတည်ပြု ပြောကြားသည်။ မနက် ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် လူစည်ကားရာ လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်သည့် တာဟန်းရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်ရှိ ဘူတာကွေ့၌ ကျောင်းသားများ စတင်စုရုံးပြီး တက္ကသိုလ်ကြိုပို့ ကျောင်းကားအားလုံးကို ရပ်တန့်တားဆီးကာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမအတိုင်း ပင်လုံရပ်ကွက်ကိုဖြတ်၍ အောင်သစ္စာရပ်ကွက်ရှိ ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဌာနချုပ် (ဒကစ) သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒကစ ရှေ့တွင် အဝါရောင်နှင့် အနီရောင် သတိပေးတားမြစ်သည့် မျဉ်းများ တားထားသဖြင့် ကျောင်းသားများသည် အဝါရောင်မျဉ်း၌ ရပ်တန့်နေခဲ့ပြီး ကားခကို ယခင်နှုန်းထားအတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်၊ ကားအစီးရေ တိုးမြှင့်ပြီး အချိန်မှန် ပြေးဆွဲပေးရန်နှင့် ကျောင်းကားတွင် ကုန်စည်များတင်ဆောင်ခြင်း တားမြစ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ တပ်နယ်မှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ရင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့က လက်ခံဆွေးနွေးပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့ကာ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများသို့ သွားရောက်၍ လူစုခွဲလိုက်ကြသည်။ ဆန္ဒပြရာတွင် ပါဝင်သော ကျောင်းသားများကို အရေးယူမှု မပြုရန် အာဏာပိုင်များနှင့် တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များက အများရှေ့မှောက်တွင် ကတိပြုကြသည်ဟု ကျောင်းသားတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ကားခလျှော့ပေါ့ပေးရန် တောင်းဆိုမှုကို ကလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများက ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့ကတည်းက လက်မှတ်ကောက်ခံခဲ့ရာ ကျောင်းသား ၅ဝဝ ကျော် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သေးသည်။ ကလေးမြို့နယ် သာယာဝတီရွာရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား ၁၀၀၀ ကျော်၊ ကျီကုန်းရွာရှိ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား ၂၀၀ ကျော်၊ ချင်းပြည်နယ် ခိုင်ကမ်းရွာအနီးရှိ ကလေးတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား ၄၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ စကားကြောင့် လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ
ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း မကြာမီဖွင့်မည်
အို/ဟောင်း အစားထိုးယာဉ် ဒေါ်လာ သန်း ၄၄၀ ကျော်ဖိုး တင်သွင်းပြီးဖြစ်	တနှစ်ကျော်အတွင်း ကားစီးရေ တသိန်းနှစ်သောင်းခန့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့၊ ကျပ်သန်း ငါးသိန်းခန့် အခွန်ရ	နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ မြန်မာ့ဆန် တင်သွင်းခွင့် အိန္ဒိယဘက်က ခွင့်ပြု	ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် တလလျှင် ကလေး ၂ဝ ခန့် ရောင်းဝယ်ခံရနေဆဲ	မန္တလေးက လမ်းဘေး ကလေးများအတွက် သြစီ ဘုရားကျောင်း၏ စေတနာ	ဝန်ကြီး ကတိမတည်ဟု ဆိုကာ တိုင်းရင်းကျောင်းသားများ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ	တိုင်းရင်းသား ဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်းသားများ ဆက်လက် ဆန္ဒပြမည်	Who is Online
We have 44 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved